नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कैलालीमा शुक्रबार राति बस पल्टिँदा १० जनाको मृत्यु, कम्तिमा २८ जना घाइते !
कैलालीमा शुक्रबार राति बस पल्टिँदा १० जनाको मृत्यु, कम्तिमा २८ जना घाइते !
सहजपुर गाविस २ कैलालीमा शुक्रबार राति बस पल्टिँदा १० जनाको मृत्यु गएको छ। डोटीको दीपायलबाट कन्चनपुरको महेन्द्रनगरका लागि छुटेको ना ५ ख ५४ २० नम्बरको बस भीमदत्त पन्त राजमार्गको सहजपुरमा भासे भीर नजिकै सडकबाट ५०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा परी कम्तिमा २८ जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा ६ जना पुरुष, ३ जना महिला र १ जना बच्चाको ज्यान गएको हो। अहिलेसम्म कसैको
सनाखत हुन सकेको छैन। घाइतेलाई उपचारका लागि कैलालीको स्थानीय अस्पतालमा पठाइएको छ। गहिरो भीरमा बस खसेको कारण उद्दारमा केही समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्दार कार्य जारी छ।